के पातलो विर्यको कारणले बच्चा जन्मदैन र ? साच्चै पातलो विर्यमा शुक्रकीटको संख्यामा कमी देखिन्छ ? यस्तो भन्छन यौन चिकित्सक - E ALL NEPAL
के पातलो विर्यको कारणले बच्चा जन्मदैन र ? साच्चै पातलो विर्यमा शुक्रकीटको संख्यामा कमी देखिन्छ ? यस्तो भन्छन यौन चिकित्सक
अण्डकोष लामोसम्म तातो वातावरणमा हुँदा शुक्रकीटको उत्पादनमै कमी आउँछ । त्यसै गरी कोकिन वा अन्य केही लागू पदार्थले पनि शुक्रकीटको संख्या तथा गुणस्तरमा कमी ल्याउँछन् । धूमपान त्यसको अर्को कारण हो । भिटामिन सी, सेलेनियम, जिंक वा फोलेटजस्ता कुराको कमी अर्को कारण हो भने लामो समयसम्म निरन्तर साइकल हाँक्नु पनि त्यसको कारण हुनसक्छ । धेरै मोटो हुनुको प्रभाव पनि यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा केही अध्ययनले देखाएका छन् । केही वंशाणुगत रोगले पनि यस्तो प्रभाव पारेको हुनसक्छ । त्यसैगरी वातावरणीय प्रदूषणको दीर्घकालीन सम्पर्कले पनि वीर्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् । विकिरण (एक्स रे वा अन्य)ले पनि शुक्रकीटको उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्छ । अर्कातिर पर्याप्त मात्रा स्खलन नहुँदा पनि शुक्रकीटको पूर्ण संख्यामा कमी आउन सक्छ । कान्तिपुर साप्ताहिक
ओली प्रचण्डको शासन सिध्याइदिने प्रकाण्डको चौतवनी
चर्चित अमेरिकी कलाकार फ्रिम्यान काठमाडाैंमा